Kimera: Tsvaga kuti ungawane sei SIMBA rekushandisa kwako!
Ita kuti zviite
Maitiro ekuonda chiuno: Maekisesaizi sei kumba? Ndedzipi nzira dzakanakisa dzokurapa?
Squats: Ndeapi akanyanya kurovedza? Tarisa uone anotyisa matipi!
Zvigadzirwa	 10 December 2018
Kimera: Ndekupi kwekutenga? Ndezvipi zvakanakira? Chii murwiyo? Chaizvoizvo zvinoshanda? Tinokuudza zvese!
Iwe unoenda kunzvimbo yekurovedza muviri zuva nezuva, chengetedza kudya kwakaringana, usashandise doro kana fodya, uye zvakadaro usati wawana mhedzisiro yawaitarisira nekushanda kwako? Pamwe inguva yekuti iwe uise mari mune yemhando yekuwedzera chikafu! Saka kana chinangwa chako chiri chekuita kuti kurovedza kwako kuve kwakanyatsoita, dzikisa mafuta ako muzana uye uremu, ipapo Kimera zvinogona kunge zvakaringana pane zvaunoda.
Kana iwe usiri kuziva ichi chinowedzera izvozvi, iwe unozoshamisika kana iwe uchiziva zvese zvazvakanakira uye zvese zvainogona kuita kukwidziridza kurovedza kwako uye kuwedzera yako mhasuru mashoma kuwana.
Iwe unoda kuziva here? Tichataura zvakawanda nezvaKimera mune inotevera misoro. Gara nesu kusvika kumagumo uye ushamiswe!
Sei uye kupi kwekutenga pamutengo wakaderera?
Tinokurudzira kuti kutengwa kwaKimera kunoitwa chete pawebhusaiti yeOnofre zviri pamutemo.Izvi zvinoreva kuti hauzviwane muzvitoro zvekuwedzera. Pa webhusaiti ye Onofre drugstore iwe unowana iyo yakanakisa mitengo uye kukwidziridzwa, pamusoro pekugamuchira chigadzirwa chemhando yepamusoro pamba, chisina chekunyepera kana chitsotsi, uye mukati menguva inofungidzirwa panguva yekutenga.
Imwe nyaya yakakosha nezvekutenga Kimera ndeyekuti inogona kuitwa nechero kiredhiti kadhi, uye Onofre inopa yakanakisa yekubhadhara mazwi. Chekupedzisira, tinosimbisa kuti kutenga kuchitoro cheOnofre chinonyatso chengeteka, uye data rako pachako uye kadhi rechikwereti zvinodzivirirwa uye zvakavanzika. Usanetseke!
KuOnofre, pamusoro pekutsvaga thermogenic Kimera, unogona zvakare kutora Kimera Mukadzi uye Extreme. Zvese zvizere zvizere mabhenefiti.
Dzvanya pazasi kuti utenge Kimera yako izvozvi!
Ndeupi mutengo weKimera?
Kimera ane mutengo unodhura kwazvo uchienzaniswa nezvimwe zvinowedzera pamusika. Ona pazasi mari yauchabhadhara kana iwe ukatenga yako izvozvi.
Zvakanaka, sezvatakambotaura, Onofre ndiyo nzira yakachengeteka yekutenga chigadzirwa ichi, uye mutengo waro ndiwo wakanyanya kufananidzwa nezvimwe zvivakwa. Kutenga bhokisi remapiritsi makumi matanhatu iwe unongobhadhara chete R $ 68,99, kana kana uchida ka2 R $ 34,50.
Iyo saiti inopa yakakura mamiriro ekubhadhara uye iwe unogona kusarudza kubhadhara nekiredhiti kadhi (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, uye Hipercard), nemari nemari yebhangi, mari kana cheki.
Dzvanya apa uye utenge Kimera yako munguva pfupi uye unakirwe nezvabuda
* Kuyeuka kuti mitengo inogona kusiyana.
Chii chinonzi thermogenic Kimera? Anoita sei?
Kimera ndeyechisikigo chinowedzera icho chine thermogenic zvimiro, ndiko kuti, zvinoita kuti iwe upise akawanda macalorie nemafuta. Izvi zvinoreva kuti kana uine imwe Workout iwe ukapisa mazana mashanu macalorie, uchishandisa Kimera iwe unogona kurasikirwa mazana masere macalorie neakafanana maitiro ekurovedzera
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuziva ndechekuti iyo yekuwedzera inoshanda chete kana iwe uchidzidzira nguva dzose, sezvo ichingo gonesa mhedzisiro yejimu. Izvi zvinoita kuti ive inokodzera chero munhu, kubva kune avo vari kutanga kudzidzisa izvozvi uye vaine tsika isinganetsi, pamwe nevanhu vatove vatambi, vavaki vemuviri, ndiko kuti, vatove nehurema hwekudzidzira mutoro.
Chii chinoumbwa nechigadzirwa ichi?
Nezve runyorwa rweKimera, iwe unofanirwa kuziva kuti iri yakasarudzika fomula, ndiko kuti, iwe haizoiwana mune chero imwe yekuwedzera pamusika. Imwe pfungwa yakakosha ndeyekuti chigadzirwa chinogadzirwa chete kubva kune zvakasikwa zvigadzirwa, uye ndosaka icho chichigona kutorwa neanenge chero munhu uye chisingawanzo kuratidza zvakakomba maitiro.
Yese fomula yayo yakagadzirirwa iwe kuzadzisa zvinangwa zvako, uchigara uchiisa hutano hwako pakutanga.
Ona pazasi zvinoumbwa naKimera:
Ungatora sei Kimera?
Kimera anowedzera mumacapsule uye anofanirwa kutorwa zuva nezuva. Inokurudzirwa kushandisa maviri macapsule, kamwe chete pazuva. Kazhinji maminetsi makumi matatu kusvika makumi mana usati wadzidziswa. Zvabuda zvatoonekwa muvhiki yekutanga.
???? Iwe unoda here kuva nemuviri wawaigara uchirota? Unobvisa iwo mafuta enzvimbo uye uine simba rakawanda rekushanda kwako? Dzvanya apa uye utenge yako Kimera izvozvi!
Ini ndinogona kutenga paMahara Musika?
Izvo zvakanaka ndezvekuti iwe tenga chigadzirwa chako chete pane iyo drugstore webhusaiti Onofre. Iyi inzira yekuvimbisa yakanakisa mitengo uyezve iyo vimbiso yemhedzisiro uye kugutsikana. Kana iwe ukawana ichi chigadzirwa chiri kutengeswa muzvitoro kana saiti senge Mercado Livre, ziva kuti anogona kunge ari ekunyepedzera ekuwedzera, uye kuatenga iwo ari kuisa kutenga kwako panjodzi.
Iwe une zvinopesana here kana mhedzisiro?
Kunge chero chinowedzera chikafu, Kimera zvakare ane zvirambidzo pakushandisa kwayo. Vakadzi vane nhumbu, vana, vakwegura uye vanhu vane hosha dzakakomba havafanirwe kuishandisa vasina kutarisirwa nachiremba. Zvakare, mhedzisiro yaro isingawanzoitika, asi kana zvikaitika zvinowanzobatanidzwa nekuwedzera kwemoyo, sezvo iri yekuwedzera yakagadzirirwa kuwedzera metabolism yako.
Usarasikirwa nemukana wekuve nekuwedzera kwakanyanya kushanda nekukurumidza mhedzisiro. Tenga yako utore mukana nemitengo yakasarudzika nemamiriro.
Zvakanakira thermogenic Kimera
Pazasi iwe unozowana chiri chakavanzika chechigadzirwa chakabudirira ichi. Takanyora zvimwe zvezvibatsiro zvacho kuti iwe uzive kuti Kimera anogona sei kushandura hupenyu hwako nemuviri. Buda!
Zvinokonzera kurasikirwa kwechido
Kuwedzera simba uye kuda
Iyo inopera nemafuta enzvimbo
Iwe unoda kunakidzwa nekutenga yako Kimera zvakachengeteka uye nemitengo yakaderera? Dzvanya apa!
Mushure mezvose, unonyatsoderedza uremu here? Kodzera?
Ehe ... Kana iwe uchida chigadzirwa icho chinokupa iwe yakawanda yakawanda mabhenefiti uye nekukurumidza uye yakajeka mhedzisiro iwe unofanirwa kuyedza kimera. Nekuti pachokwadi icho chigadzirwa chemhando yepamusoro, chakakomba uye icho chinokupa iwe mhedzisiro iwe yauri kutsvaga. Kuwedzera kune ese mabhenefiti akanyorwa pamusoro, iwe unogona kuzviwana nekukurumidza uye nyore kuOnofre uye pamitengo isingarambike.
Usapotsa mukana, hazvishamise kuti chigadzirwa ichi chiri kuita nemazvo, kwatove nezviuru zvevanhu vanogutsikana uye vanogutsikana. Ngatiedzei?
Kana iwe wakamboshandisa Kimera kare, tiudze isu mune zvakataurwa izvo mabhenefiti awakaona. Kana uchiri nemibvunzo, ndapota siya mubvunzo wako pazasi. Tichapindura nekukurumidza sezvazvinogona.
Nutritionist Larissa Scharf - CRN 21101878 / P
Aromatherapist uye Psychoanalyst Nutritionist
Special Kliniki / Mitambo / Hytotherapy
Av. Abelardo Bueno 3300 Kamuri 905
ONLINE uye KUPINDA
Ona zvinyorwa zvemunyori
76 pfungwa pa "Kimera: Ndekupi kwekutenga? Ndezvipi zvakanakira? Chii murwiyo? Chaizvoizvo zvinoshanda? Tinokuudza zvese!"
Comments Mhinduro Dzekare
Kurume 24, 2017 pa09: 09 pm - pepeta
Mhoroi, ndinongomhanya mazuva ese, ndinogona here kushandisa kimera zvingandiunze mhinduro here? pamwe nekudya kwakanaka kwechokwadi.
Kubvumbi 5, 2017 pa02: 29 pm - pepeta
Mhoro.Ndinodzidzisa na18pm. Ndinogona here kutora makapisi maviri kutenderedza 2pm kana kutanga?
Kubvumbi 16, 2017 pa18: 46 pm - pepeta
zvakanak sei kutora? Ini ndoda kutenga zvimwe ini handizive kuti ndozvitora sei.
Kubvumbi 24, 2017 pa16: 24 pm - pepeta
ndinogona here kutora macapsule maviri pamberi petrill
Chivabvu 21, 2017 pa02: 14 pm - pepeta
Helo! Ndiri kuyamwa, ndinogona kutora kimera?
Chivabvu 22, 2017 pa10: 16 pm - pepeta
Chikumi 28, 2017 pa20: 46 pm - pepeta
Ndinogona here kunwa mapiritsi maviri kamwechete?
Nyamavhuvhu 22, 2017 pa13: 30 pm - pepeta
Usadaro iwe ...
Nyamavhuvhu 12, 2017 pa13: 29 pm - pepeta
Mhoroi.Ndichangotanga kunzvimbo yekurovedza muviri muguta rangu. Uye mushure memavhiki mashoma (2), ndakatenga Kimera kuti andibatsire kudzikisa huremu. Parizvino handina kumbonzwa dzungu, kurovera pamoyo. Ini ndinoti ndisati ndatanga kunzvimbo yekurovedza muviri ndakamboongororwa. Nezve izvo zvaainzwa senge kutora. Iwe unonzwa muviri wako uchidziya, uye simba rakawanda uye zvakanyanya kushoma kuneta. Iyi poindi yekuneta chinhu chakanyanya kunaka. Handinzwe ndakaneta ndichiita maekisesaizi uye mhasuru. Mangwana acho handinzwe kurwadziwawo. Ini ndaitora 1 kapisi pazuva. Iye zvino ndichatanga ne2 capsules pazuva. Imwe isati yadya masikati uye imwe isati yadzidziswa.
Kana zvakakodzera? Mune maonero angu hongu! Chigadzirwa kusvika parizvino chiri kupa pane zvainovimbisa! Handeyi
Ona gare gare. Nhasi ndiri 83,3 pandakatanga kutora 84,7 uye pandakatanga kunzvimbo yekurovedza muviri ndaive 87,9
Ndinoyeuka kuti ndanga ndichiitora kwemazuva matatu uye kamwe chete kapsule.
Nyamavhuvhu 20, 2017 pa17: 31 pm - pepeta
Kimera anozvitora pamberi kana mushure mekudzidziswa?
Gumiguru 22, 2017 pa10: 56 am - pepeta
Ndeipi nguva chaiyo yekutora.? Inguva yakareba sei ndisati ndadzidziswa ndinofanira kutora kimera?
Cintya mara da dombo
Mbudzi 10, 2017 pa 09:36 - pepeta
Ndinofanira kunwa mapiritsi mangani?
Kukadzi 8, 2018 pa11: 55 am - pepeta
Tamara - Mutungamiri
Kukadzi 15, 2018 pa10: 19 am - pepeta
Inokurudzirwa kuidya maminetsi makumi matatu usati wadzidziswa
Chivabvu 1, 2018 pa07: 45 pm - pepeta
Ini ndinogona kutora maviri macapsule paawa parwendo, nechinangwa chekutsva kukuru.
Nyamavhuvhu 15, 2018 pa21: 42 pm - pepeta
Manheru akanaka. Ini ndinotora Amato yemigraine, pane chirambidzo pakushandiswa kwaKimera?
Mbudzi 26, 2018 pa 23:29 - pepeta
Add Comment kukanzura mhinduro
Chengetedza dhenda yangu muchikwereti ichi nenguva inotevera yandinotaura.
Whey Protein: Bhenefiti yeHypertrophy, Hutano uye Kuonda
Zvekudya zvekutanga zvinoita kuti muviri ugare uine hutano: Dzidza zvavari uye kuti ungazvidya sei!
Lipostabil - Ziva kuti chii, mabhenefiti uye kana zvakaipa kune hutano hwako!
Chickpeas: Ona mabhenefiti uye nemabatiro aungaite ichi chinonaka kumba!
Lentili: Tsvaga mhando, mavara, tafura yezvokudya uye kuti ingagadzirwa sei!
Quitoplan - Simba rine simba rekuwedzera riri kubatsira kudzikisa kufutisa muBrazil.
collagen - Chikafu chinowedzera chikafu chine hydrolyzed collagen, inonziwo "Botox muCapsules"
Duratron - Chigadzirwa chechisikigo chinovimbisa kupedza matambudziko evarume.
volkano - Thermogenic kirimu iri kuita kubudirira kukuru mumajimu muBrazil.
Oiri Hydration: Dzidza kuzviita!
Cold Sore: Tsvaga kuti ungavabvisa sei!
Musha Cough Remedies: Tsvaga Kuti Ungamise Sei!
Colic Remedies: Ona kuti ndeapi akanakisa!
Mukadzi weLavitan: Tsvaga mabhenefiti eiyi yekuwedzera!
Saxenda: Iyo inodzora mushonga iyo ANVISA yakaburitsa!
Maitiro ekuti nzara dzako dzikurumidze kukura uye kusimba? Ona mamwe matipi!
Dianabol: Zvese Nezve Imwe Yeanonyanya Kuzivikanwa Anabolics!